Xulka Senegal oo Noqday Dalkii u Horeyay ee Africana oo Guul Gaaray Kulamada Koobka Adduunka+SAWIRRO – Gool FM
Xulka Senegal oo Noqday Dalkii u Horeyay ee Africana oo Guul Gaaray Kulamada Koobka Adduunka+SAWIRRO
( Russia ) 19 Juunyo 2018. Senegal ayaa guul muhiim ah ku daah furtay koobka adduunka oo ay cayaareen markoodii u horeysay tan iyo sanadkii 2002 waxayna 2-1 kaga adkaadeen Poland
Kulanka qeybtii hore ayaa lagu kala nastay 1-0, oo ay ku hogaamineysay xulka Senegal waxuuna ahaa goolkaas mid ka ma’ ah ama Otareeto uu iska dhaliyay cayaariyahanka Poland Thiago Cionek kaa oo ay ku sarmatay barbad ku socotay goolka daqiiqadii 37-aad.
Segenal ayaa ka bandhig cayaar fiicneed dhigooda Poland waxayna inta badan ahaayeen kuwa cayaaray kubbadd weerar ah.
Qeybta labaad kulanka markale Senegal ayaa la timid goolka labaad waxaana u dhaliyay Mbaye Niang oo kulanka badal kusoo galay.
Goolka xulka Poland waxa u dhaliyay dhamaadka kulanka gaar ahaan daqiiqadii 86-aad Grzegorz Krychowiak.
Guusha ay gaartay Senegal ayaa ka dhigan dalkii u horeyay ee Africana oo guul gaara kulankiisa koowaad ee tartanka kadib Egypt Morocco Nigeria iyo Tunisia oo dhamaantood guuldaro ku daah furtay koobka adduunka.
Eric Abidal “Waxaan dooneynaa inaan Barcelona ka dhigno koox aad u adag”
Carles Puyol oo ka warbixiyay shuruuda kaliya uu xulka qaranka Spin ugu guuleysan karo koobka aduunka 2018